DHAGEYSO Dowlada Soomaaliya oo lacago ku wareejisay mamaulka gobolka sahbeelada dhexe. - GTN SOMALI TV
DHAGEYSO Dowlada Soomaaliya oo lacago ku wareejisay mamaulka gobolka sahbeelada dhexe.
May 28, 2018 admin Wararka Maanta 0
Ayadoo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ay saamayn ka soo gaartay fatahaadaha labada wabi ee shabeele iyo Juba ayay dowlada Soomaaliya lacago loogu talagalay dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ku wareejisay maamulka gobolka shabeelada dhexe.
Lacagtaan oo sida ay dowladu sheegtay gaaraysa ilaa boqol iyo sideetan kun oo dollar ayaa lagu tala galay in la gaarseeyo meelaha ugu daran sida degmooyinka Jowhar,Mahadaay iyo Balad-cad kuwaasoo wabiga shabeele uu si aad ah ugu fatahay.
Xildhibaan Maxamed Cumar oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena dowlada dhexe ay u soo wakiilatay inuu lacagtaas gaarsiiyo deegaanada ay fatahaaduhu saameeyeen ayaa sheegay inuu gaarsiiyay maamulka gobolka.
Meelaha ugu daran ee wabigu ku fatahay waxaa ka mid ah degmada Beledweyne ayadoo boqolaal ka mid ah qoysaskii ku noolaa ay guryahooda ka barakaceen balse hada ayaa la soo sheegayaa in dadka qaar ay dib ugu laabanayaan xaafadahooda maadaama ay meelaha gaar biyihii ka gureen wallow xaafado ka mid ah degmada Beledweyne ay wali biyo fara badan fadhiyaan.
Maraykanka oo qaramada midoobay ka codsaday inay xayiraad saarto 6 sarkaal oo u dhashay suudaanta koonfureed